Fedora nwụnye ntuziaka 28 Nzọụkwụ Nzọụkwụ | Site na Linux
Mgbe emeputara ọkwa ọhụrụ nke Fedora 28 nke anyị na-ekwu ebe a na blọọgụ ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ ya malitere mbugharị site na Fedora 27 gaa na ụdị ọhụrụ ahụ.
Ọ bụ ezie anyị nwere nhọrọ ime ya n’enweghị ntinye ọzọ, a na-atụ aro ya mgbe niile ịwụnye site na ncha gbakwunye maka ndị ọrụ ọhụụ ha kwesiri, naỌ bụ ya mere anyị ji eso gị ntuziaka nwụnye dị mfe.
Ezubere ntuziaka a maka ndị ọhụrụ, gbakwunyere ụfọdụ mgbanwe maka usoro nrụnye na-eme ka ọ nwekwuo ọfụma.
1 Ibudata ma dozie oke nke usoro ntinye
1.1 CD / DVD echichi mgbasa ozi
2 Etu esi etinye Fedora 28?
Ibudata ma dozie oke nke usoro ntinye
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata onyonyo nke sistemụ, nke anyị nwere ike ịdekọ na DVD ma ọ bụ draịva USB, anyị ga - ebudata ya na weebụsaịtị ya. njikọ ebe a.
Ozugbo emere nke a, anyị ga - amalite na okike nke usoro ntinye.
CD / DVD echichi mgbasa ozi
Windows: Anyị nwere ike idekọ iso na Imgburn, UltraISO, Nero ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mmemme ọbụlagodi na enweghị ha na Windows 7 ma emesịa ọ na-enye anyị nhọrọ iji pịa nri na ISO.
Windows: You nwere ike iji Universal USB Installer ma ọ bụ LinuxLive USB Creator, ha abụọ dị mfe iji.
Ọ bụ ezie na e nwekwara ngwá ọrụ ndị otu Fedora na-enye anyị ozugbo, a na-akpọ ya Fedora Media Onye edemede site na peeji nke Red Hat ebe o na akowa otu o si aru oru.
Linux: Nhọrọ a tụrụ aro bụ iji iwu dd, nke anyị na-akọwa nke ụzọ anyị nwere Fedora oyiyi yana kwa ebe ugwu anyị nwere eriri anyị.
N'ozuzu ụzọ nke pendrive gị na-abụkarị / dev / sdb nke a ị nwere ike ịlele na iwu:
Ugbua amatala na ị ga-egbu iwu ndị a
Etu esi etinye Fedora 28?
Ugbua site na usoro ntinye anyị, anyị gaba boot ya na kọmputa anyị nke ga - egosiputa ihuenyo na - esote ma ọ bụrụ na anyị emee usoro nke ịdekọ ihe oyiyi sistemụ ahụ n'ụzọ ziri ezi:
Anyị ga-ahọrọ nke mbụ anyị ga-echere ka ọ kwado ihe niile dị mkpa iji malite usoro nrụnye.
Mere nke a anyị na-echere ntakịrị, na ihuenyo ọzọ ga-apụta nke na-enye anyị nhọrọ nke ịnwale usoro ahụ na-enweghị itinye (Live Live) ma ọ bụ nhọrọ iji malite usoro nrụnye.
Anyị ga-pịa wụnye na Osisi Ozugbo ga-emeghe ọkachamara ọkachamara Fedora.
Lee Ọ ga-agwa anyị ka anyị họrọ asụsụ anyị yana mba anyị. Ozugbo emere nke a, anyị na-aga n'ihu.
Ọ bụrụ na ị wụnye Fedora na nsụgharị ndị gara aga, ị nwere ike ịchọpụta na onye nrụnye nwere naanị nhọrọ ole na ole ugbu a.
Ebe a naanị anyị ga-edozi mpaghara oge anyị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ọ bụghị naanị anyị na-aga ịhọrọ nhọrọ "Nwụnye ebe"
Nke a bụ na-enye anyị ohere ịhọrọ ụzọ Fedora ga-etinye:
Hichapụ diski niile iji wụnye Fedora
Anyị na-ejikwa ngalaba anyị n'onwe anyị, mezie diski ike, hichapụ nkebi, wdg. Nhọrọ akwadoro ma ọ bụrụ na ịchọghị ida ozi.
Mgbe e mechara anyị ga-ahọrọ nkebi iji wụnye Fedora ma ọ bụ họrọ diski ike zuru ezu. N'ihe banyere ịhọrọ nkebi, anyị ga-enye ya usoro kwesịrị ekwesị, fọdụrụ dị ka nke a.
Pịnye nkebi "ext4" na ebe ugwu dị ka mgbọrọgwụ "/".
Kọwaa nke a, anyị na-aga pịa mere na anyị ga-alaghachi na isi na ihuenyo ọkachamara nwụnye, ebe a ịwụnye bọtịnụ ga-nyeere na usoro ga-amalite.
Na njedebe naanị anyị ga-ewepu mgbasa ozi echichi ma malitegharịa.
Na mmalite usoro A ga-agbazi ọkachamara nhazi ebe anyị nwere ike ịhazi onye ọrụ sistemụ anyị na paswọọdụ.
Nakwa ikwado ma ọ bụ mechie ụfọdụ ntọala nzuzo yana imekọrịta ụfọdụ akaụntụ email.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Fedora 28 Nzọụkwụ Nzọụkwụ Ntuziaka
Continuega n'ihu na-emepụta ihe ngwọta na-emeghe n'enweghị nlekọta ọ bụla, ga-abụ ihe na-enweghị isi ebe ọ bụ na ọgụgụ isi na-aga n'ihu na-etolite yana oge mgbanwe na ịchịkwa kọmputa na ụmụ mmadụ nwere ike ime ...
Zaghachi Miguel Cisneros
Ndewo, enwere m nsogbu, ọ na - eme na m na - ebudata iso 28 nke Linux site na peeji ahụ ebe ọ bụ na edere fedora naanị m ga - enweta 26 m họrọ nhọrọ iji hazie iji họrọ ihe oyiyi iso 28 nke m na - ebudata m na - ede ya na usoro ahụ niile dị mma ma dịkwa mma Agbanyeghị mgbe m gara ịwụnye ya, achọpụtara m na iso ya emebi .. na nke a gịnị ka m ga - eme?
Zaghachi na 123
Gbalịa iyi ma lelee MD5 iji nyochaa na ISO adịghị emerụ.
Mee ka ọrụ mmetụ ahụ dịkwuo mma ma megharịa bọtịnụ mmanya aha na Ubuntu 18.04